हावा कुरा गरेर जनताले पत्याउनेवाला छैनन् : हिमाल शर्मा (भिडियो सम्वाद) | KTM Khabar
२०७३ साउन १८ गते १८:३६ मा प्रकाशित
नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनमा पच्चिसौँ वर्ष उत्साहपूर्वक समय बिताएका हिमाल शर्मा विभिन्न उत्तार चढावसगै अहिले माआवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य तथा काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष हुन् । राजनैतिक त्याग, तपस्या बलिदान र समर्पणका लागि लाखौँ युवाहरुका उर्जाका स्रोत बन्न सफल उनै हिमाल शर्मासँग ktmkhabar.com का लागि रवि भट्टराईले गरेका विशेष अन्तरवार्ताको संपादित अंश :-
केटिएम खबरमा स्वगत छ ।
कसरी दिन वित्दै छन् त ?
हामी पार्टीमा काम गर्ने कार्यकर्ताहरु हौँ । नियमित पार्टीका जिम्मेवारीहरु पनि हुन्छन्, जनताका कामहरु पनि हुन्छन् । पार्टी र जनताका कामहरु गरेरै दिन वित्ने गर्छन ।
तपाई आम जनतामा लोकप्रिय मानिनुको कारण ?
मान्छेहरुले त्यसरी बुज्छन् मलाई खुसिनै लाग्छ । सानै उमेरमा नै राजनीतिमा लागियो । लामो समय म विद्यार्थी आन्दोलनमा रहेँ । विद्यार्थी आन्दोलनमै रहँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालय केद्रीय क्याम्पस कृतिपुरमा पनि मैले सभापतिको जिम्मेवारी समाल्ने अवसर पाएँ । थुप्रै वर्ष जेल पनि बसियो त्यही कारण पनि मलाई सबैले चिन्नुहुन्छ ।
संघर्षको क्रममा तपाईको टाउकाको मूल्य तोकियो अहिले यो अवस्थामा तपाई हुनुहुन्छ कस्तो लाग्छ ?
पक्कै पनि पहिले सबै कुरा बुझेर राजनीतिमा लागेका हैनौँ तर सानै उमेरमा लगभग तेह्र, चौध वर्षको उमेरमा पोस्टर टाँस्दै गर्दा गिरफ्तार परे ४३ सालमा म जेल गइसकेपछि अहिले सम्म आउँदा म निरन्तर पूर्ण कालीन कार्यकर्ताको रुपमा म छु । त्यतिखैरै सबै कुराहरु बुझेर लागियो भन्ने त होइन सानै उमेरमा सबै कुरा वुझिन्छ भन्ने पनि हुँदैन तर आधारभूत रुपमा केही परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा लाग्दै गर्दा माओवादी आन्दोलनसम्म आइपुगियो । र जनयुद्धमा हामी सक्रिय सहभागि पनि भयौँ । जनयुद्ध कै क्रममा हाम्रा टाउकाका मुल्य तोकिए ,कयौँ साथीहरु गुमायौँ अङ्गभङ्ग भयौँ जेल नेल पनि खायौँ र त्यो वर्ग युद्धको क्लाइमेक्स त्यो लडाई थियो त्यो लडाई लडिरहँदा दुख अवश्य पाइन्छ । कोही न कोहीले लडाई नलड्ने हो भने परिवर्तन पनि त सम्भव छैन नि ? कोही न कोही मर्न तयार नहुने, कोही न कोही भोकै बस्न तयार नहुने, कोही न कोही जेल जान तयार नहुने हो भने परिवर्तन पनि त सम्भव छैन, त्यही भाको कारणले तत्कालै केही पाउँछौ भनेर पनि भएन तर परिवर्तका निम्ति मृत्युलाई हत्केलामा राखेर हामी हिडँेकै हो । त्यति बेला टाउकाको मूल्य तोकियो यसलाई मैले वर्ग संघर्षको एउटा पेचिलो स्वरुपको रुपमा बुझेको छु ।
त्यतिखेर तपाईहरुले गर्नुभएको आन्दोल जुन उद्देश्यका लागि थियो र अहिलेको अवस्था जुन चलिरहेको छ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
अवश्यपनि हामी त जनवादी व्यवस्था ल्याउने, खान नपाएकाले खान पाउने, पढ्न नपाउनेका लागि पढ्ने ग्यारेन्टी, औषधि खान नपाएर कोही मर्न नपरोस् भन्ने आन्दोलनमा हामीहरु लाग्यौ । तर युद्धले के गरायो भनेन हामीले पूर्ण रुपमा जित्यौँ न हामीलाई राज्यले हराउन सक्यो, यस्तो अवस्थामा सम्झौता गरेर जानुपर्ने स्थिति देखा पर्यो । कि लडाईलाई निरन्तर सिद्धान्तका कुरा रटेर लानु पर्ने भयो हैन भने केही न केही सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने भयो । शान्ति सम्झौता देखि यहाँ सम्म आउँदा राजतन्त्रको अत्य भयो मलाई सबैभन्दा खुसि लाग्छ किनभने हामी लडेका थियौं एजेण्डा उठाएका थियौँ अहिले समानुपातिक समावेसिका कुरा आएका छन् हो जनताले भनेजस्तै परिवर्तन भएको छैन तर राज्यको पुनः र संरचना हुँदै जाँदा र अहिले संविधानलाई कार्यन्वयन गर्दै जाँदा वास्तवमा परिवर्तन गर्न सक्यौ भने अहिलेको अवस्थामा त भन्न सक्दिन तर नेतृत्व गर्नेहरुले पनि असल नेतृत्व दिएको खण्डमा अवश्य पनि जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्नेछन् । र यो परिवर्तन माओवादी र यसका कार्यकर्ताहरुले ल्याएका हुन भन्ने बुझ्ने छन् , अरु दश वर्ष पछाडि हाम्रा आन्दोलनको प्रसंशा हुनेछ भन्ने आत्मविश्वास मलाई छ ।
दश वर्षे जनयुद्धको उपलब्धि के राजतन्त्र फल्नुमात्र थियो त ?
अवश्य पनि व्यवस्था बदलिएको छ । संविधान कार्यन्वयनको स्थितिमा छ नेतृत्व ईच्छा शक्ति लिएर अगाडि बढ्यो भने संभावनाका ढोकाहरु खुलेका छन् । पहिले सामन्ति व्यवस्थामा जुन हिसावमा थियो मुलुक तर अहिले जनताको घर दैलोमा सरकार पुग्ने भैसक्यो । यसलाई कार्यान्वयन कसरी हँुदै जन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । जहाँसम्म व्यक्तिगत रुपमा सबैले सन्तुष्टि त पाउन सक्दैनौ तर पनि सधै निरास भएर पनि त भएन नि त केही न केही उपलब्धि भएका छन् यसलाई संस्थागत गर्दै जानुपर्छ आन्दोलन त अझै सकिएको छैन । फेरि टाउका कै मूल्य तोकेको सरकारसँग सहकार्य गर्दै जानुपर्ने कुरा छ त्यो त राजनीतिमा स्थायी शत्रुु र स्थायी मित्र भन्ने पनि हँुदैन । शान्ति पक्रियामा आएपछि काँग्रेस एमाले लगायत पार्टीहरु त सहयात्री पार्टी हुन भनेर बुझ्नु पर्यो । संविधान बनाउन एकजुट भए व्यवस्था परिवर्तन गर्न एकजुट भए भन्ने तरिकाले बुझ्नु पर्छ धेरै पुराना कुराहरु कोट्याउन थाल्यौ भने पनि कुरा मिल्दैन ।
अहिले पार्टी सरकारमा जानु ठिक थियो ?
बहुदलीय व्यवस्थामा सरकारमा जानु कुनै अनौठो हैन, प्रचण्ड सरकार मै जान हुदैँन भन्ने पनि केही लेखेको छैन, फेरी अन्य दलका नेता प्रधानमन्त्री हुँदा ठिक हुने र प्रचण्ड हँुदा नहुने भन्ने कुरा पनि हुन्छ र ? केही कुराहरु मिलेनन् मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नु हुन्छ भने त बामपन्थिहरूको सरकार बनाएर जानु पर्छ यसमा कुनै शंंका छैन तर सबैको सहमति हुनुपर्छ भन्ने होला तर पार्टीले नै निर्णय गरेपछि अब बहुमतीय सरकार बन्छ । धेरै छलाङ् मारेर लान्छ त म भन्दिन तर सुधारका कुराहरु गर्छ ।
तपाई पार्टीको काठमाडौँ जिल्ला प्रमुख पनि हो, एउटा आरोप छ नि संगठनमा स्थानीयलाई पाखा अनि बाहिरकालाई काख भन्ने ?
काठमाडौँ ७५ जिल्ला कै केन्द्र हो । यहाँ हरेक जिल्लाका मान्छेहरु छन्, मलाई हेर्नुस म पनि काठमाडौँको त हैन नि, तर पच्चिसौँ वर्ष मैले काठमाडौँ मै आन्दोलनमा बिताए अब मलाई के भन्ने ? तपाईहरुले त्यसरी बुझिदिन भएन हामीले सबैभन्दा पहिले स्थानीयलाई नै प्रथमिकतामा दिने हो ।
पार्टी सरकारमा जाँदै छ ,अब जनताले महसुस गर्ने जनलहर के ल्याएको छ नी ?
पहिलो कुरा आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो बनाउनुपर्यो, कुरा हैन काम हुनु पर्यो । जति काम गरिन्छ परिणाममुखि होस मैले कमरेड प्रचण्डलाई पनि यसै भन्ने गरेको छु । राज्यको पुनःसंरचनाको कुरा छन्, हामीले प्रचण्डलाई भन्ने गरेका छौँ । भाषणमात्र गरेर हुनेवाला छैन कि अब काम गर्नु पर्यो । थोरै काम गरौँ तर परिणममुखि गरौँ, हावा कुरा गरेर जनताले पत्याउनेवाला छैन । अब पहिलो कुरो आन्तरिक राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउनु पर्यो मधेसी दलका नेताहरुसँग वार्ता र संवाद अगाडि बढाउनु पर्यो ।
माओवादी केद्रमा असल नेताहरु पनि छन्, तर कुरा सुनिदैन प्रचण्डको एकल निर्णय मात्र हुन्छ जुन जनताको पक्षमा हुदैन भन्ने आरोप पनि छ ?
हैन त्यस्तो हुँदैन । प्रचण्डलाई कतिपयले कुराहरु परिवर्तन गर्छ भनेर बुझ्छन तर मैले कसरी बुझ्छु भने उहाँ डाइनामिक व्यक्ति हो उहाँ विभिन्न विकल्प दिन सक्नु हुन्छ जड सुत्रीय सोचमा उहाँ रहनुहुन्न ,त्यसरी त्यस्तो हो भने त जनयुद्ध हाँक्नै सक्नुहुन्न थियो नि, जनयुद्ध लड्नु भन्दा शान्ति पक्रियामा ल्याउनु जटिल थियो यस्तो जोखिम उठाउन सक्ने व्यक्तिलाई तपाई कसरी बुज्नुहुन्छ ? निर्णय गर्न सक्ने क्षमता कमरेड प्रचण्डसंग छ यो सर्वमान्य कुरा हो ।
माओवादी सत्ताको स्वाद चाखिरहने अनि जनताले केही नपाउने हो ?
त्यस्तो हैन, राष्ट्रलाई बलियो बनाउने काममा र आन्तरिक राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउने काममा अब लाग्नु पर्छ । राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा जानु पर्छ, आर्थिक विकासतर्फ जानु पर्ने हुन्छ । संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ, अहिले भुकम्पीडित हरुको निम्ति पुनःनिर्माणका कुराहरु छन यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ । यस्ता विविध कुराहरु छन् ।
तपाईहरु सरकारमा जाँदै गर्दा, भुकम्प पीडीतहरुलाई के गर्नु हुन्छ नि ?
भुकम्प पिडितले पाउने रकम आजसम्म पाइसक्नु पथ्र्यो तर पाउन सकिरहेका छैनन् अब पहिलो काम भनेको चाँडो भन्दा चाँडो राहत दिन पर्यो भन्ने पक्षमै पहल कदमी हुन्छ । यसका लागि बाधा अड्चन छन् भने कहाँ फुकाउनुपर्छ फुकाईदिने सजिलो बनाईदिने काम गर्नु पर्छ । र मधेसी दलहरुलाई वार्तामा ल्याएर संविधान कार्यान्वयनको वातावरण बनाउनु पर्छ ।
तपाईहरुको पार्टीमा सिङ्गो पार्टीको निर्णय भनेकै अध्यक्षको निर्णय हो ?
हैन हैन त्यस्तो हैन, त्यसो हो भने त हामी के हो त, आज मात्रै पनि हाम्रो बैठक थियो के हो भने उहाँ पार्टीले जुन स्प्रीट अगाडि सार्छ त्यसमा कला प्रयोग गरेर झन सुन्दर बनाउन सक्नुहुन्छ । र त्यो क्षमता उहाँमा छ ।
सत्तामा पुगेपछिको पहिलो काम ?
आन्तरिक राष्ट्रियतालाई मजबुद बनाउदै, भुकम्पपीडितलाई राहत तथा मधेसी दलका साथीहरुलाई वार्तामा ल्याएर संविधान कार्यान्वयन नै प्रमुख हुन जस्तो लाग्छ । त्यस्तै महङ्गी कालोवजारी भ्रष्टाचारीलाई नियन्त्रण गर्न पर्छ भन्ने हाम्रो सुझाउ छ ।
पार्टी सत्तामा जाँदैछ , अब तपाई जस्ता असल नेताको भूमिका के ?
जनताले सबै एकै पटक हुन्छ भनेर बुझिदिनु भएन , तर सुधारका कामहरु गर्दै जाने, परिणाममुखि काम गर्दै जाने र समुन्नत देश निर्माणमा गर्ने कुरामा सकारात्मक भूमिका मेरो रहन्छ । र सरकारमा जाने साथीहरुलाई राम्रो का मगर्नेलाई संस्थागत गर्दै जाने खराब प्रवृतिका व्यक्तिहरुको सधै भण्डाफोर गर्दै जाने नै हो ।
तपाईहरुले मेरा कुराहरु राख्ने अवसर दिनुभयो धन्यवाद छ ।
हिमाल शर्मासंगको भिडियो कुराकानी हेर्नका लागि :-